Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Sty, Chalazion, Blepharitis အဖြစ်များတဲ့ မျက်စိရောဂါတွေ
Sty, Chalazion, Blepharitis အဖြစ်များတဲ့ မျက်စိရောဂါတွေ
1. December 15, 2010 9:22 PM
ကျွန်တော်က ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူမှာ အသက် (၆) နှစ်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်က ပြည်ပမထွက်ခင် (၃) ရက်လောက်အလို သားဖြစ်သူမှာ ဘယ်ဘက်မျက်စိစွန်ပါတယ်။ မျက်စိဆရာဝန်ထံ သွားပြတော့ မျက်စိစွန်တာ ခွဲလိုက်ရင် နောက်မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မခွဲဖြစ်ဘူး။ သွားရမဲ့ရက် နီးကပ်နေလို့ ဆရာဝန်က Lomeflox, Sterile Eye Drops ခပ်ခိုင်းတယ်။ အဲ့ဒီဆေးခပ်တာ ပျောက်သွားတယ်။ နောက်နှစ်မှာ တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်ခွံလှန်ပြီးတော့ ရိုက်လို့မရလို့ ဒီတိုင်း မျက်လုံးပိတ်ပြီးပဲ ရိုက်ပို့လိုက်ရပါတယ်။
• မျက်စိ အတွင်းစွန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ခွံမှာရှိတဲ့ အရည်ထွက် (ဂလင်း) အိတ်လေးတွေမှာ ရောဂါပိုးဝင်တာကို Sty (Hordeolum) မျက်စိစွန်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ အိတ်လေးတွေ ပိတ်ရာကနေ ပိုးဝင်တယ်။ တဖက်ရော နှစ်ဖက်လုံးပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မျက်ခွံအတွင်းမှာ စွန်တာကို ဆေးစာနဲ့ Chalazion လို့ ခေါ်တယ်။ နီရဲနေမယ်၊ ဖေါင်းနေမယ်၊ နာမယ်၊ ကြာရင် ထိပ်ဝမှာ ဖြူဝါဝါ ထိပ်ကလေးလို မြင်ရနိုင်တယ်။ ပူလောင်နေမယ်၊ ယားမယ်၊ အရည်ယိုမယ်၊ မျက်စိဖွင့်မရ ဖြစ်မယ်၊ ကြည့်မကောင်း ဖြစ်မယ်၊
• အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ တရားခံဟာ Staphylococcus bacteria (စတက်ဖလိုကောကပ်စ်) ဗက်တီးရီယား ဖြစ်တယ်။
• မျက်နှာ သန့်ရှင်းရေး၊ မသင့်တဲ့-မကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်သုံးတာ၊ Blepharitis မျက်ခွံရောင်တာ၊ Meibomitis နဲ့ Rosacea မျက်စိရောဂါတွေကနေ ဆက်ဖြစ်တာကြောင့် မျက်စိစွန်နိုင်တယ်။ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲ နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလဲ လွဲချနိုင်တယ်။
• အပူကပ်ပေးပါ၊ ၁၅ မိနစ်ကြာ တနေ့ ၆ ခါလုပ်ပါ။ မျက်နှာကို ရိုးရိုးဆပ်ပြာနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ၊ မမှည့်သေးဘဲ မညှစ်ပါနဲ့၊ ပိုဆိုးနိုင်တယ်။ ပိတ်နေတာ ပွင့်သွားရင် သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားမယ်။
• အနာသက်သာဆေးသောက်ပါ။ Acetaminophen/Paracetamol (Tylenol) တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်။
• Antibiotics စားဆေး၊ Doxycycline သုံးတာများတယ်။ တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက်။
• Antibiotic ointment ပိုးသေဆေး မျက်စဉ်း၊ Triple Antibiotic Ointment, PFIZER Terramycin, Tobrex Eye Ointment Tobramycin Ophthalmic Solution, Ciloxan Eye Ointment Brand 0.30% 3.5 G, BACITRACIN, Bacitracin, Terramycin (Oxytetracycline Hydrochloride)
• Antibiotic/Steroid ointment ပိုးသေဆေးနဲ့ (စတီရွိုက်) ရောထားတဲ့ မျက်စဉ်း၊ BNP Triple Antibiotic Opthalmic Ointment with Hydrocortisone
• လိုအပ်ရင် ပြည်ခွဲထုတ်ရမယ်။ ပြည်ပေါက် ပျော်ပြီ ဖြစ်သွားပါမယ်။ ခွဲထုတ်တဲ့အခါ မျက်ခွံ အပြင်ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်၊ အတွင်းဘကက်ကဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရတယ်။ ဒါးရာကို မျက်ခွံအတွင်းအင်္ဂါ မျဉ်းနဲ့အညီ ခွဲရတယ်။
2. 13 Sep 10, 18:30
မျက်စိစွန်တာ ဘာကြောင့်ဘာလည်း မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလည်း၊ ဖြစ်ရင်လည်း၊ ဘယ်လိုကုသမှု ခံယူရမလည်း။
• မျက်စိစွန်တာကို ဆေးစာနဲ့ External stye or Hordeolum လို့ ခေါ်တယ်။ ချွေးထွက် (ဂလင်း) တွေမှာ ပိုးဝင်တာပါ။
• အတွင်းစွန်တာလဲ ရှိသေးတယ်။ Chalazia ခေါ်တယ်။ မျက်စိစွန်တာ ရက်မကြာပါ။ အပြင်စွန်တာက ဆေးမကုတာတောင် ၇-၁ဝ ရက်သာ ကြာတယ်။ အတွင်းစွန်က ကြာတယ်။
• Staphylococcus ဗက်တီးရီးယား ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ မျက်တောင်မွှေး အခြေမှာ အဆီထွက်ပေါက် ပိတ်နေလို့လဲ အဲလိုဘဲ ဖြစ်တယ်။ အအိပ်ပျက်၊ အစားပျက်ကနေလဲ ဖြစ်ဘို့ များစေတတ်တယ်။ သန့်ရှင်းရေး လိုတာကြောင့်လဲ ဖြစ်မယ်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ လက်ကိုင်ပုဝါ လဲသုံးတာကနေ ကူးတယ်။
• ဖြစ်မဲ့နေရာမှာ နီရဲရဲအဖုလေး၊ အလယ်မှာ ခပ်ဝါဝါလေး ဖြစ်လာမယ်။ မျက်ခွံလဲ ရောင်နေမယ်။ နာမယ်။ ပူမယ်။ မျက်ခမ်း အနားမှာ အက်နေမယ်။ မျက်လုံး ကောင်းကောင်း ဖွင့်မရဘူး။ ကြည်လို့လဲ မကြည်ဘူး။ မျက်ဝတ်-မျက်ရည် ယိုမယ်။ အလင်းရောင် မကြည့်နိုင်ဘူး။ မျက်စိထဲ တခုခုဝင်နေသလို ခံစားရမယ်။
• Erythromycin ပဋိဇီဝမျက်စဉ်း နဲ့ ပဋိဇီဝစားဆေး Chloramphenicol, Amoxacillin တွေ ပေးကုရပါတယ်။ Chloramphenicol မျက်စဉ်းကို တချို့နိုင်ငံတွေမှာဘဲ သုံးတယ်။ ပြည်ရှိနေတာမို့ မဖေါက်ရင် ပေါက်ထွက်တယ်။ ပြည်ကို သေသေခြာခြာ ရှင်းပေးရမယ်။
• အပူကပ်ပေးရင် သက်သာတယ်။ အနာသက်သာတဲ့ဆေး ပေးအုံးမယ်။ မိတ်ကပ်၊ (အိုင်း-လိုင်နာ) မသုံးသေးပါနဲ့။ ရောဂါပိုးက ဘေးပြန့်သွားရင် ပိုပြင်းတဲ့ဆေးတွေ ပေးရမယ်။ ရှားရှားပါးပါး အတွင်းစွန်တာကနေ အနာရွတ်ဒဏ် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ လက်ဆေးတာနဲ့ မကူးအောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်။
3. Wed, Jul 25, 2012 at 2:41 PM
သမီးက မျက်ခမ်းမှာ အဖုလေးဖြစ်ပြီး အဲဒီအဖုက ပြည်တည်တက်ပါတယ်။ ပြည်ပေါက်မှ အနာသက်သာသွားပါတယ်။ မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားဆေးဝါးတွေ ရမ်းပြီးမလုပ်ရဲပါဘူး။ ဆေးခန်းကပေးတဲ့ Pfizer ကုမ္မဏီကထုတ်တဲ့ Terramycin ဆေးကိုဘဲ ထည့်ပေးပါတယ်။ အနာမှဲ့လာမယ့်အချိန်အထိ စောင့်ပြီး၊ ပြည်တွေ ထွက်သွားမှ မျက်စိအရောင် ကျသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာ နောက်အဖုတလုံး ထပ်ထွက်လာတက်ပါတယ်။ မျက်စိဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့မှာ ဆေးမှန်မှန်ထည့်ပေးရုံမှတပါး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အမြဲစောင့်ကြည့်နေရပါသည်။
• Warm compresses အပူ၊ ရေနွေးဝတ်ကပ်ပေးဘို့က ဆေးတွေထက် ပိုလိုတယ်။ တနေ့မှာ ၄-၅ ခါထက်မနည်း ကပ်ပေးရမယ်။ တခါကပ်ရင် ၁ဝ-၁၅ မိနစ်ကြာပါစေ။
• Gently massaging အသာအယာ အနာခံနိုင်သလောက် နှိပ်ပေးပါ။
• ပြည်က သူ့ဖါသူပေါက်သွားမယ်။ ခွဲစရာ လိုချင်မှလိုမယ်။
• မျက်စိစွန်တာကို ပဋိဇီဝစားဆေး နဲ့ ပဋိဇီဝမျက်စဉ်းပေးတာ လို-မလို ဆရာဝန်တွေ သဘောထား တထပ်တည်း မကျဘူး။ အများဆုံး (အနည်းဆုံး) သဘောတူတာက ၂-၃ ပတ်နဲ့မပျောက်ရင် ဆေးပေးပါ။
• မျက်စိစွန်တာ ၃ ပတ်နဲ့ မပျောက်ရင်၊ ပြန်ပြန်ဖြစ်ရင်၊ တခုမကဖြစ်ရင် Doxycycline ဆေးသောက်ရမယ်။ Antibiotic ointment ပဋိဇီဝ-မျက်စဉ်းလဲ ခပ်ရမယ်။ တချို့ ဆရာဝန်တွေက Antibiotic/Steroid ointment combination ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ (စတီရွိုက်) ရောထားတဲ့ မျက်စဉ်းကို ညွှန်းတယ်။ တချို့ဆရာဝန်တွေက Antibiotic ointment ပဋိဇီဝ-မျက်စဉ်းကိုသာ သုံးစေချင်တယ်။ Occusoft lid cleaner or TheraTears SteriLid eyelid cleaner ရိုးရိုး ပိုးသေဆေးမပါတဲ့ မျက်စဉ်းကိုတော့ သုံးသင့်တယ်။
• Blepharitis မျက်ခွံရောင်တာက ဗက်တီးရီးယားကနေဖြစ်တယ်။ No-tears shampoo မျက်စဉ်းခပ်ပေးရမယ်။ အပူ၊ ရေနွေးဝတ်ကပ်ပေးဘို့က ဆေးတွေထက်ပိုလိုတယ်။ တနေ့မှာ ၄-၅ ခါထက်မနည်းကပ်ပေးရမယ်။ တခါကပ်ရင် ၁ဝ-၁၅ မိနစ်ကြာပါစေ။ အသာအယာ အနာခံနိုင်သလောက် နှိပ်ပေးပါ။